Guddiga doorashooyinka Puntland oo Garoowe kusoo dhaweeyay dhigooda Soomaaliya – TPEC
GAROWE, Puntland- Mas’uuliyiin katiran Guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC, ayaa maanta garoonka diyaaradaha Canoco kusoo dhaweeyay xubno katirsan Guddiga doorashooyinka heer Federaalka, kuwaasoo maalmaha soo socda ku sugnaan doona deegaanada Puntland.
Guddoomiye ku-xigeenka TPEC, Maxamud Soofe Xasan iyo xubno kamid ah Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland, ayaa mas’uuliyiinta heer Federaal si maamuus leh ugu soo dhaweeyay caasimadda Garoowe, iyagoo sheegay inay ku faraxsanyihiin booqashada ay ku yimaadeen caasimadda Puntland.
Guddoomiye Soofe, ayaa saxaafadda u sheegay inay tahay guul weyn oo bulshada Puntland usoo hoyatay in wafdigan ay kusoo dhaweeyaan Garoowe isagoo intaas ku daray inay u rajaynayaan guul iyo khayr.
Sayid Cali Sheekh Maxamed, oo wafdigan hogaaminayay ayaa dhankiisa xusay in muddo ay joogi doonaan deegaanada Puntland islamarkaana ay booqan doonaan dhowr magaalo iyagoo ka samayn doona wacyigalin la xariirta hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya.
Booqashadan ayaa timid xilli Guddiga doorashooyinka Puntland ee TPEC ay wadaan dedaalo ku aadan sidii Puntland lagu gaarsiin lahaan nidaam dimuqraadi ah oo dadku ay kusoo dooranayaan hogaankooda.